thitsankhant.com Audyt SEO strony
Titlethit san khant
running man tv series အကြောင်းသူဌေးသမက်ဘဝ မှ ပြေးထွက်လာခဲ့သူfacebook မှ post များ (၁)sm entertainment ရဲ့ အနုပညာသတင်းe.x.o အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ d.o. ရဲ့ history and career life (as an actor )a blind girl and her love (မြန်မာပြန်)bloody reunion (2006) movie reviewlost & found (2016) movie reviewpudding monsters (android & ios) game reviewresident evil: vendetta (2017) review
running man အဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးဦးသောင်းဝင်း မိသားစု09 254 490 409 facebook page : noon vr myanmarad by noon vr myanmarဒါကတော့ exo က xiumin နဲ့ nct က mark ပါဒါကတော့ girl generation အဖွဲ့မှ yoona ရဲ့ ig မှာတင်ထားတဲ့ပုံလေးပါ .. acc name လေးတွေလဲပါလို့ မသိသေးတဲ့သူများ အမြန်ပြေးလို့ follow လုပ်လိုက်ကြရအောင်လား .ရယ်စရာလဲကောင်း ပျော်စရာလဲ ကောင်းမှာ အသေအချာပဲနော် .. လူတွေလည်း အများကြီးပဲဒါကတော့ အုပ်စုလိုက်ကြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါဒါကတော့ exo က xiumin နဲ့ nct က mark ပါဒါကတော့ baek hyun ကနေ ဓာတ်ပုံတွေမရိုက်ကြတော့ဖို့ တောင်းဆိုထားတာလေးပါ ..ဒါကတော့ to the beautiful you ဇာတ်လမ်းတွဲက poster ပါဒါကတော့ exo next door ဇာတ်လမ်းတွဲက poster ပါ ❤ဒါကတော့ cart ဇာတ်ကားရဲ့ poster လေးပါဒီပုံလေးတွေကတော့ hello monster ဇာတ်ကားမှာ သူပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကပုံလေးတွေပါဒါကတော့ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ hello monster ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ poster ပါဒါကတော့ my annoying brother ဇာတ်ကားက poster လေးပါဒါကတော့ သူ supporting role ကနေ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ it’s ok ,that’s love ဇာတ်ကားရဲ့ poster လေးပါဒါကတော့ သူ lead actor အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ pure love ဇာတ်ကားရဲ့ poster လေးပါ6.15.3
skip to content #content email mailto:admin@thitsankhant.com scroll down to content #content email mailto:admin@thitsankhant.com Linki zewnętrzne
thit san khant https://thitsankhant.com/ home https://thitsankhant.com facebook https://www.facebook.com/thitsankhantofficial twitter https://twitter.com/thitsankhant instagram https://www.instagram.com/thitsankhant/ july 9, 2017 https://thitsankhant.com/2017/07/09/running-man-tv-series-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8/ running man tv series အကြောင်း https://thitsankhant.com/2017/07/09/running-man-tv-series-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8/ thomas nicolas acm https://www.facebook.com/thomasnicolas007 july 5, 2017 https://thitsankhant.com/2017/07/05/fb2/ သူဌေးသမက်ဘဝ မှ ပြေးထွက်လာခဲ့သူ https://thitsankhant.com/2017/07/05/fb2/ - https://www.facebook.com/noon-vr-myanmar-1595127287470233/ u thaung win https://www.facebook.com/uthaung.win.967?fref=nf june 28, 2017june 28, 2017 https://thitsankhant.com/2017/06/28/facebook-%e1%80%99%e1%80%bd-post-%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%81%81/ facebook မှ post များ (၁) https://thitsankhant.com/2017/06/28/facebook-%e1%80%99%e1%80%bd-post-%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%81%81/ moe https://www.facebook.com/profile.php?id=100009094185649&fref=mentions pyiet oo aung https://www.facebook.com/blackdream21?fref=nf june 26, 2017july 4, 2017 https://thitsankhant.com/2017/06/26/sm-entertainment-%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%82%95-%e1%80%a1%e1%82%8f%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8/ sm entertainment ရဲ့ အနုပညာသတင်း https://thitsankhant.com/2017/06/26/sm-entertainment-%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%82%95-%e1%80%a1%e1%82%8f%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8/ post by : chan myat noe https://www.facebook.com/thet.myatnoe.7946 june 23, 2017june 23, 2017 https://thitsankhant.com/2017/06/23/d-o-from-e-x-o/ e.x.o အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ d.o. ရဲ့ history and career life (as an actor ) https://thitsankhant.com/2017/06/23/d-o-from-e-x-o/ eingyin phyu https://www.facebook.com/eingyin.phyu.14?fref=ufi june 23, 2017 https://thitsankhant.com/2017/06/23/a-blind-girl-and-her-love-%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%b9/ablind girl and her love (မြန်မာပြန်) https://thitsankhant.com/2017/06/23/a-blind-girl-and-her-love-%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%b9/ -	https://thitsankhant.com/2017/06/23/a-blind-girl-and-her-love-%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%b9/ #maungpauk https://www.facebook.com/hashtag/maungpauk?source=feed_text&story_id=451581658534878 june 22, 2017 https://thitsankhant.com/2017/06/22/bloody-reunion-2006-movie-review/ bloody reunion (2006) movie review https://thitsankhant.com/2017/06/22/bloody-reunion-2006-movie-review/ -	https://thitsankhant.com/2017/06/22/bloody-reunion-2006-movie-review/ june 21, 2017 https://thitsankhant.com/2017/06/21/lost-found-2016-movie-review/ lost & found (2016) movie review https://thitsankhant.com/2017/06/21/lost-found-2016-movie-review/ -	https://thitsankhant.com/2017/06/21/lost-found-2016-movie-review/ adventure http://www.imdb.com/genre/adventure?ref_=tt_ov_inf june 21, 2017june 21, 2017 https://thitsankhant.com/2017/06/21/pudding-monsters-android-ios-game-review/ pudding monsters (android & ios) game review https://thitsankhant.com/2017/06/21/pudding-monsters-android-ios-game-review/ zeptolab https://play.google.com/store/apps/dev?id=8155782941676464587 https://goo.gl/d32dsg https://goo.gl/d32dsg https://goo.gl/84nnc8 https://goo.gl/84nnc8 june 20, 2017 https://thitsankhant.com/2017/06/20/resident-evil-vendetta-2017-review/ resident evil: vendetta (2017) review https://thitsankhant.com/2017/06/20/resident-evil-vendetta-2017-review/ -	https://thitsankhant.com/2017/06/20/resident-evil-vendetta-2017-review/ tariq l walker https://www.facebook.com/tariqlwalker?fref=mentions #thitsankhant https://www.facebook.com/hashtag/thitsankhant?source=feed_text&story_id=1457208974345051 page2https://thitsankhant.com/page/2/ next page https://thitsankhant.com/page/2/ july 2017 https://thitsankhant.com/2017/07/ june 2017 https://thitsankhant.com/2017/06/ actor (3) https://thitsankhant.com/category/actor/ book (2) https://thitsankhant.com/category/book/ entertainment (2) https://thitsankhant.com/category/entertainment/ facebook (2) https://thitsankhant.com/category/facebook/ game review (1) https://thitsankhant.com/category/game-review/ korea (3) https://thitsankhant.com/category/korea/ movie review (3) https://thitsankhant.com/category/movie-review/ home https://thitsankhant.com facebook https://www.facebook.com/thitsankhantofficial twitter https://twitter.com/thitsankhant instagram https://www.instagram.com/thitsankhant/ proudly powered by wordpress https://wordpress.org/ Zdjęcia
Text on page:skip to content thit san khant menu home facebook twitter instagram email scroll down to content posts posted on july 9, 2017running man tv series အကြောင်း running man အဖွဲ့ဝင် ၈ ဦး running man လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ တော်တော်များများသိနေလောက်ပါပြီ….တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်အကျော်အကြားဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး good sunday အနေဖြစ် တောင်ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ၆နာရီ၁၅မှာ sbs ရုပ်သံလိုင်းက ထူတ်လွင့်ပြသပါတယ်။ “don’t walk, run!”ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုတော့ running man ပရိသတ်တွေကတော့ သိပြီးလောက်ရောပေါ့။ running manအစီအစဉ်ဟာဆိုရင်ဖြင့် (၂၀၁၀ ခုနှစ် ၇လပိုင်း ၁၁ရက်နေ့)မှာ အဖွဲ့ဝင် ယောက်ျားလေး ၇ယောက်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွင် အဖွဲ့ဝင်အနည်းငယ်အပြောင်းအရွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယခု ၇နှစ်နီးပါရှိပါပြီ..။ running man ဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အရှည်ကြာဆုံး variety showတွေထဲကတစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ် ။ ယခုအခါ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ yu jae-suk (ယူဂျယ်ဆော့), ji suk-jin(ဂျီဆော့ဂျင်), kim jong-kook(ကင်မ်ဂျုံးဂု),kang gary(ဂန်ဂယ်ရီ), ha-ha(ဟားဟား), song ji-hyo(ဆုန်းဂျီဟို)နဲ့ lee kwang-soo(လီဂွမ်ဆူ)တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ (မှတ်ချက်။ ။ season 1 အတွက်သာလျင်ဖြစ်ပါသည်) (၁) – ယူဂျယ်ဆော့ အနုပညာလောကမှာ ယူဂျယ်ဆော့ ၊ mcယူအဖြစ် လူသိများပါတယ် ။ running manအဖွဲ့သားတွေကတော့ ယူ့စ်ဝီလီ ၊ အကဘုရင်ယူ ၊ ဆဲမ်ဘာယူ ၊ နှံကောင် အစရှိတဲ့နာမည်ပြောင်တွေကို ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိပါတယ် ။ အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာ ရေသေနတ် စပိုင်အဖြစ် နာမည်ကြီးသူလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ (၁၉၇၂)မှာ မွေးဖွားခဲ့လို့ အခုဆို (၄၅)နှစ်ရှိပါပြီ ။ (၂၀၀၈)မှာ သတင်းကြေညာသူ na gyung eun (နာဂေါင်အန်)နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး yoo ji hoo(ယူဂျီဟူး)ဆိုတဲ့သားတစ်ယောက် ရှိပါတယ် ။ (၂) – ဂျီဆော့ဂျင် အစ်ကိုနှာခေါင်းကြီး ၊ တောဆိတ်-စတဲ့နာမည်ပြောင်တွေနဲ့ running manပရိသတ်တွေ အသိများကြပါတယ် ။ easy brotherလို့လည်း ဂွမ်ဆူနဲ့တွဲပြီး အခေါ်ခံရတတ်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နာမည်ဖြဲပြိုင်ပွဲမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဖမ်းရတာ လွယ်ကူလို့ပါ ။ race starter (ပြိုင်ပွဲစတင်သူ) လို့ ခေါ်ရတာကတော့ ပြိုင်ပွဲတော်တော်များများမှာ ပထမဆုံးအဖြဲခံရလေ့ရှိတာကြောင့် သူ အဖြဲခံရပြီး အဖမ်းခံရရင် ပြိုင်ပွဲ စပြီ(race start)-လို့ effect သံကြီးထွက်လာတတ်ပါတယ် ။ (၁၉၆၆)မှာ ဖွားမြင်သူဖြစ်လို့ အသက်(၅၁)နှစ်ရှိပါပြီ ။ yoo su jeong (ယူဆူဂျောင်း)ဆိုသူနဲ့ လက်ထပ်ထားပြီး ji hyun woo(ဂျီဟွန်ဝူး)ဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ် ။ (၃) – ကင်မ်ဂျုံးဂု turboအဆိုတော်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သူပါ ။ အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်ခဲ့သလို running manမှာ လည်း ကစားရာတွင် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ။ အဖွဲ့သားတွေရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကို စပါတာဂု ၊ ကွန်မန်ဒါ အစရှိတဲ့ စွမ်းဆောင်ရှင်နာမည်တွေနဲ့ အများဆုံးဖော်ပြခံရသူတစ်ယောက်ပါ ။ ခွန်အားကြီးတဲ့အတွက် ကျားကြီးလို့လည်း တင်စားကြ ပါတယ် ။ ဂျုံးဂုရဲ့အချစ်ရေးကလည်း rmပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်နေပါတယ် ။ အသက်(၄၁)ရှိပြီဖြစ်တဲ့(၇၆)ဖွား-ဂျုံးဂုက ယခုချိန်ထိ လူပျိုကြီးပါ ။ အသက်(၄၀)မှာ အိမ်ထောင်ပြုမယ်လို့ ပြောဖူးခဲ့ပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ (၄၅)နှစ်ရောက်ရင် အိမ်ထောင်ပြုမယ်လို့ ဖြေထားပါတယ် ၄) – ဂန်ဂယ်ရီ ဂန်ဂယ်ရီဟာ leessang ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ rap -တေးရေး/တေးဆိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ running manမှာတော့ monday couple အဖြစ် ဂျီဟိုနဲ့တွဲပြီး လူသိများပါတယ် ။ သူနဲ့ဂျီဟိုက ကင်မရာတွေ မရှိတဲ့အချိန်မှာလည်း အလွန်ရင်းနှီးကြတယ်လို့ သိရတော့ အမှန်တကယ် စုံတွဲတွေဖြစ်နေပြီလားဆိုတာ စဉ်းစားချင်စရာပါပဲ ။ (၇၈) မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် ဂယ်ရီက အသက်(၃၉)နှစ် ရှိပါပြီ ။ (၅) – ဟားဟား (ဟားဒုန်ဟွန်) ဟားဟား ၊ ဟာရိုရိုလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ကလေးကြီးဆိုပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေက ခေါ်ကြပါတယ် ။ (၂၀၁၂)ခုနှစ်မှာ အဆိုတော်(byul)နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး သားလေး(dream)ကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်လို့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်နေပါပြီ။ (၇၉)ခုနှစ်ဖွားဖြစ်တာကြောင့် အသက်ကတော့ (၃၈)နှစ် ရှိပါပြီ ။ (၆) – ဆုန်းဂျီဟို running manရဲ့တစ်ဦးတည်းသောမိန်းကလေးဆုန်းဂျီအကြောင်းပါ။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက mwd မှာပြတဲ့ ဂျူမှုံ ဇာတ်လမ်းတွဲကို သိကြမှာပေါ့ ။ ဂျူမုံရဲ့ဇနီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။ (၁၉၈၁)မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့-ဂျီဟိုက အသက်(၃၆)နှစ် ရှိပါပြီ ။ အဖွဲ့သားတွေက သူမကို အူတူတူဂျီလို့ နာမည်ပြောင်ပေးထားပါတယ် ။ သို့သော်လည်း ရွှေနဲ့ပက်သက်သမျှ ပြိုင်ပွဲတွေ ၊ running manရဲ့ ဆုတော်တော်များများကို ဂျီဟိုကပဲ သိမ်းပိုက်ထားတာပါ ။ ရွှေဂျီဟိုလို့လဲ ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ monday couple အဖြစ်လည်း လူသိများကြပါသေးတယ် (၇) – လီဂွမ်ဆူ rm မှာအသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး သစ်ကုလားအုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်ကို ရရှိထားသူပါ ။ အာရှမင်းသားလေးတစ်ပါးအဖြစ်လည်း အာရှမှာ နာမည်ကြီးသူပေါ့ ။ running man မစ်ရှင်တွေ အာရှနိုင်ငံတွေမှာလာလုပ်ရင် ပရိသတ်တွေက ဂွမ်ဆူ ကို မင်းသားတစ်ပါးလို ကြိုဆိုကြတဲ့အတွက် အဖွဲ့ဝင်တွေတောင် တအံ့တဩဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သစ္စာဖောက်ဂွမ်ဆူအဖြစ် ပြေါကြပါတယ် ။ ဘာကြောာင့်လဲမေးရင်တော့ running manပြိုင်ပွဲတိုင်းလိုလိုမှာ အဖွဲ့သားတွေဟာ သူ သစ္စာဖောက်တာကို တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ခံရလို့ပါ ။ ပြီးတော့ ဂျုံးဂုကို အချိန်ရရင်ရသလို ဖဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့၂ယောက်ဟာလည်း အရမ်းချစ်ကြသူပါ။ (၈၅)ခုနှစ်ဖွားဖြစ်တဲ့အတွက် အသက်(၃၂)နှစ် ရှိပါပြီ ။ ref:wiki and rm page post by : thomas nicolas acm posted on july 5, 2017သူဌေးသမက်ဘဝ မှ ပြေးထွက်လာခဲ့သူ ဦးသောင်းဝင်း မိသားစု အဖေကတကယ်တော့သူဌေးသမက်တယောက်ပါ။ အမေ့ရဲ့အဖေ ကျနော်တို့အဖိုးက ရွှေဘိုခရိုင် ရေဦးမြို့နယ်ထဲက တင်းတိန်ရံလို့ခေါ်တဲ့ ရွာမှာ ဆန်စက်သုံးခုရှိတဲ့အထဲက ဆန်စက် တခုပိုင်ရှင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဖေက သူဌေးသမက်ဖြစ်ချင်တဲ့လူမဟုတ် ဘဲ ကိုယ်တိုင်သူဌေးဖြစ်ချင်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်။အဖေ့ရဲ့အဖေကျနော် တို့အဖိုးကတော့ သူဌေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အဖေတို့လူလား မမြောက်တမြောက်အရွယ်မှာ စီးပွားပျက်ခဲ့ရှာတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပွဲဈေးလိုက်ရောင်းရတဲ့အထိအခြေအနေရောက်ခဲ့တာမို့ အဖေ့ရဲ့ လူငယ်ဘဝဟာ မလှခဲ့ရှာပါဘူး။ ပွဲဈေးလိုက်ရောင်းရတဲ့အခါအနေ အစားဆင်းရဲခဲ့ရပုံကို ကြုံကြိုက်တဲ့အခါပြန်ပြောပြလို့ တစွန်းတစ သိခဲ့ရပါတယ်။ပညာလဲတပိုင်းတစနဲ့ ဆက်မသင်နိုင်တော့ဘဲ ဘဝတက္ကသိုလ်ကို ကြားဖြတ်ရောက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ အမေနဲ့အိမ်ထောင်ကျတော့လဲ ပညာတပိုင်းတစနဲ့ စီးပွားကျမိသားစုကလာတဲ့အဖေဟာ မျက်နှာငယ်ခဲ့ရဟန်တူပါရဲ့။ ယောက်ခမရဲ့ဆန်စက်မှာ တာလီစာရေးလိုလို စပါးကြိုပွဲစားလိုလို တောက်တိုမယ်ရဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရင်း အကိုနဲ့ကျနော်တို့ရဲ့ ရှေ့ရေးကိုတွေးပူလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီသားနှစ်ယောက်ကိုတော့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး ရွာမှာဆက်နေလို့လဲ ရွာသားလေးတွေဘဲဖြစ်ကြတော့မယ်။ဒို့တော့မြို့တက်မှဖြစ်တော့ မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး လွယ်အိပ်တလုံးနဲ့မုံရွာမြို့က ငယ်သူငယ်ချင်း ဦးလူရင်ဆီကို မြို့ပြလေ့လာရေးခရီးစဉ်ထွက်ပါတော့တယ်။ငယ် သူငယ်ချင်းဦးလူရင်ရဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါအားပေးကူညီမှုနဲ့ဘဲမုံရွာမြို့ ကို အဖေနဲ့ကျနော်တို့ မိသားစု ရောက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ မြို့ရောက်ခါစ ပွဲစားငယ်ဘဝမှာလဲ အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ ကြုံခဲ့ရပေမဲ့ အဖေ့ရဲ့ဇွဲသတ္တိကို လောကဓံဟာတဖြေးဖြေးအရှုံးပေး လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ပညာဆုံးခန်းမတိုင်ဘွဲ့မရခဲ့ပေမဲ့ အဖေ့ရဲ့စီးပွား ရေးနည်းဗျူဟာတွေဟာ သိတ်ပညာရှင်ဆန်တယ်ဆိုတာ ကျနော် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်းနဲ့ သိလာခဲ့ရပါတယ်။ အဖေ့ထက်အရင်စောစွာ မြို့ကိုရောက်နှင့်နေကြတဲ့ ပွဲစားကြီးတွေဟာအရှိန်ရအောင်မြင်နေ ကြပြီမို့ သူတို့ပွဲရုံကိုဆန်လာချတဲ့ ကုန်သည်တွေကိုငွေကြေး ဖေါဖေါသီသီထုတ်ပေးရှင်းပေးနိုင်ကြပေမဲ့ အဖေကသူတို့လိုမပေး နိုင်ပါဘူး။အဲဒီမှာအဖေက သူ့နည်းဗျူဟာတွေကို စတင်ပါတော့ တယ်။တမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ ဆီ ဆား ငရုတ်ကြက်သွန် ငါးပိငါးခြောက် ပွဲရုံတွေ သံသွပ်စက်ပစ္စည်း ဒီဇယ် ဓာတ်ဆီ နဲ့ ရွာကလူတွေဝယ် တတ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုင်မှန်သမျှ ကို စက်ဘီးလေးတစီးနဲ့ ပတ်ပါတော့ တယ်။ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပါတယ် ကျနော်ဆန်ပွဲစား မြမောင်ပါ အုံးခြံရပ် ညောင်တပင်လမ်းမှာကျနော့ဆန်ပွဲရုံရှိပါတယ် ကျနော့်ဆန်ကုန်သည်တွေက ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါခင်ဗျားတို့ဆီက ပစ္စည်းဝယ်ဖြစ်အောင်ကျနော်လွှတ်ပေးပါမယ်။ခင်ဗျားတို့ကလဲဈေး လျှော့ပေးပါ ငွေကိုလဲကျနော်ကတာဝန်ခံရှင်းပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ ငွေကိုတော့ချက်ချင်းလက်ငင်းအပြေအကျေမယူပါနဲ့ ကျနော်ငွေဝင် ရင်ဝင်သလို ချေပေးပါမယ်။ဒါကိုတော့လိုက်လျှောပေးပါ ကျနော် မှန်မှန်ကန်ကန်နေ့စဉ်ပေးနေမှာပါလို့ လိုက်ပြောပါတယ်။ 09 254 490 409 facebook page : noon vr myanmar35000 ks only in myanmar 1956 /1957 လောက်ကအသက် 39 နှစ် အရွယ် လူလတ်ပိုင်းတယောက် မုံရွာမြို့ပေါ်က ပွဲရုံပေါင်းစုံကို ဟမ်းဘားစက်ဘီးတစီးနဲ့လှည့်ပြီး သူ့ဆန်ပွဲရုံကိုလူအများသိရှိရေး တခြားပွဲရုံ တွေက ပစ္စည်းတွေကိုအရစ်ကျ ဝယ်နိုင်ဘို့ နဲ့ သူ့ပွဲရုံကဆန်ကိုလဲ အရစ်ကျ ငွေချေ စံနစ်နဲ့ ရောင်းချ ပေးမဲ့အကြောင်း လှည့်ပြီး ဈေးကွက် စီးပွားရေးထိုးစစ်ဆင်ပါတော့တယ်။သူဝယ်မဲ့ ဆီ ဆား ဆေး လူသုံးကုန်ပစ္စည်း အိမ်ဆောက် ပစ္စည်းဆိုင်တွေကအကျိုးဆောင်ခကော်မရှင် ပေးပေမဲ့ အဖေကမယူဘဲ ဝယ်သူရဲ့ဈေးနှုံးမှာ ဘဲ ဈေးလျှော့ပေးခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ငါ သူ့ဆန် ရောင်းရတဲ့အပေါ်ကပွဲခတခါယူခဲ့ပြီးပြီ သူဈေးဝယ်တဲ့အထဲက ပွဲခတခါထပ်ယူရင် နှစ်ခါစား မတရားယူသလိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမယူခဲ့တာလို့ နောက်မှပြန်သိခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုကြိုးစားနေရတာက ကုန်သည်တွေဆန်အိတ်လာချ ရင် သူ များပွဲရုံတွေလို ၅၀ိ/ ၁၀၀ိ/ အသုံးငွေ ထုတ် မပေးနိုင်လို့ပါ။ ဆန်ကုန်သည်တွေက ဆန်အိတ်ချ ပြီးရင် ငွေအသုံးထုတ်ချင်ပါတယ်။သူတို့လိုအပ် တာတွေ ဝယ်ဘို့ပါ။အဲဒီမှာ အဖေက ငွေမလိုပါ ဘူး မင်းဘာလိုချ င်သလဲကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုင် သွားလိုက် ငါလက်မှတ်ရေးပေးလိုက်မယ်။ငါ့ ပွဲရုံက လက်မှတ်နဲ့ဆိုရင် သူများတွေငွေလက် ငင်းပေးဝယ်တာထက်ဈေးချိုစေရမယ်ဆိုပြီး သူ့လက်မှတ်တွေကိုငွေလိုတန်ဘိုးရှိလာအောင် အသက်သွင်းပါတော့တယ်။တကယ်လဲသူ့ လက်မှတ်နဲ့ ဝယ်တဲ့လူတွေက ပစ္စည်းတွေကို ဈေးချိုချိုနဲ့ရပါတယ်။အဖေရမဲ့ကော်မရှင်က ဈေးနှုံးထဲမှာပြန်နှုတ်ထားတဲ့အပြင် ပစ္စည်းဈေးကလဲ ဆိုင်အနှံ့ရှောက်မေးအချိုသာဆုံးဖြစ် အောင်ဆစ်ထားသေးတာကိုး ဒီတော့ဈေးချိုပြီ ပေါ့။အဲဒီလိုနဲ့ အဖေ့လက်မှတ်ကလေးတွေဟာ တဖြေးဖြေးတန်ဘိုးရှိ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနဲ့ ငွေ စက္ကူ လိုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ ငွေထက်တန်ဘိုးရှိတယ်။ဂုဏ်သိက္ခာရှိရင် ငွေမပါဘဲလုပ်နိုင် တာတွေရှိတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့လုပ်ပြသွားခဲ့ တာတွေပါ။ကျ နော်အဖေအရွယ်ရောက်မှအဖေ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့တာတွေ တစိမ့်စိမ့်ပြန်တွေး ရင်းနဲ့မှ တရေးရေးပြန်မြင်လာခဲ့ တာတွေပါ။ သူတို့ခေတ်က ဈေးကွက်စီးပွားရေး စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ကုန်စည်ဖလှယ်ခြင်းနည်းပညာ မိမိလုပ်ငန်း ကြော်ငြာခြင်း ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမပေါ်သေး ပါဘူး။ ရိုးသားစွာကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။အဖေ မကွယ်လွန်ခင်အထိ ယူကြုံးမရ တဖွဖွပြော တတ်တဲ့ စကားတခွန်း ရှိပါသေးတယ်။မင်းတို့ ခေတ်ကျ မှ ပွဲစား ဆိုတဲ့လူတန်းစားဟာအနိမ့် ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်သွားတယ်ကွာ တဲ့။ ကလေကချေ လူလိမ်လူကောက် ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့ဖြစ်သွားရတယ်။ပွဲစားမလို တဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါရန်တဲ့။ပွဲစားများလာ ရောက်မေးမြန်းခြင်း သည်းခံပါ တဲ့။ငါပွဲစား တသက်လုံးလုပ်လာတာ ငါ့ကိုဘယ်ကုန်သည် ဘယ်ဝယ်သူရောင်းသူ ကလန်ကဆန်ပြန်ပြော နေတာ မင်းတွေ့ဘူးသလဲလို့မေးဘူးပါတယ်။ငါကလဲ ငါ့ပွဲရုံထဲဆန်တအိတ်ချ လိုက်တာနဲ့ အဲဒီဆန်ကုန်သည်ဆီက ပွဲခ ၂၅ါး(နှစ်ဆယ့် ငါးပြား ) ငွေတမတ် ငါယူတော့မယ်။ အဲဒီလူနဲ့ သူ့မိသားစုရဲ့ စီးပွားရေး ကျ န်းမာရေး လူမှုရေး ကိစ္စအဝဝဟာ ငါ့မှာတာဝန်ရှိတယ် လို့ငါခံယူ တယ်။ဆန်လာရောင်းရင်း သူ့ကိုကြည့်ရတယ် ဟေ့ကောင် မင်းကြည့်ရတာကျ န်းမာရေး ကောင်းပုံမရဘူး ဘယ်ဆရာဝန်ဆီသွားလိုက် ငါကလွှတ်လိုက်တယ်လို့ပြော သေချာစစ်ပေး လိုက်လိမ့်မယ်။ဟိုနေ့ကမင်းမိန်းမရန်ဖြစ်တယ် သူများကိုရိုက်တယ်ပြောသံကြားတယ် နောက် မဖြစ်စေနဲ့ ဖြစ်ရင်လဲမင်းဝင်မပါနဲ့ သူတို့ချ င်း ဖြစ်တာကအရေးမကြီးဘူး ယောင်္ကျားတွေဝင် ပါလို့ လက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်ရင်ဒုက္ခရောက်ကုန် မယ်။မင်းမိန်းမကိုပြောလိုက် ငါကမှာတယ်လို့ ကိုယ့်ယောင်္ကျားကို ကိုယ်ထောင်ထဲထည့်သလို ဖြစ်သွားမယ် လို့။သူတို့မိန်းမခြင်းက စရုံ စတာ ယောင်္ကျားတွေလက်လွန်တော့ မင်းဘဲထောင် ထဲရောက်သွားမှာသိရဲ့လား။မင်းတို့မှာက သား သမီးတွေနဲ့ သူတို့ရှေ့ရေးကရှိသေးတယ်။မင့် သားအကြီးကောင် စာတော်တယ်ကြားတယ် ပညာရေးအားပေး ဒါမှလူတလုံးသူတလုံးပညာ တတ်ဖြစ်မှ မင်းတို့လိုမဆင်းရဲမှာ ဒီကောင်ရှစ် တန်းအောင်ရင်ငါ့ပြော ဒီမှာအသင်အပြကောင်း တဲ့ကျောင်းငါအပ်ပေးမယ်။သားသမီးပညာရေး အားမပေးရင် နှစ်သလိုဖြစ်သွားမယ် သူတို့ မတိုးတက်ရင်မင်းတို့မှာလဲ တာဝန်မကင်းဘူး။မင့်သမီးငယ် ကျောင်းဆက်မထားတော့စိတ် လေပြီး ကောင်လေးတယောက်နဲ့ဘာလိုလို ဖြစ်နေသံကြားတယ်နော်။အဲဒီကောင်လေးက အသောက်အစားမကင်းဘူးလို့ငါကြားတယ်။ အသာအချိုသပ်ပြီး ရှေ့မဆက်အောင်တား သွားလဲရိုက်လားပုတ်လားမလုပ်နဲ့ခြောက် ထုတ်သလိုဖြစ်ပြီး လိုက်ပြေးသွားအုံးမယ်။ ကျနော်ကြားဘူးခဲ့တဲ့ သူ့ကုန်သည် တယောက်မိသားစုရဲ့ ကျ န်းမာရေး လူမှုရေး တွေကို သူတတ်သလောက် အကြံပေးပြောပြ နေတာပါ။ငါတို့ခေတ်က ပွဲစားကြီးဆိုရင် အတော်ဂုဏ်ယူကြရတာကွ။ပွဲစားကြီးရဲ့တူပါ ပွဲစားကြီးရဲ့မိတ်ဆွေပါ အဲဒီလောက်အထိကွ ပွဲစားကလဲ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန် နေတယ်။မင်းတို့ခေတ်ကျ မှ ပွဲစားဆိုတာရှက် စရာတောင်ကောင်းနေပြီ လို့မကြေမနပ်ခဏ ခဏပြောလေ့ရှိပါတယ်။လေ့လာမှတ်သားဖို့ သူတတ်သလိုသင်ပြပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်အဖေ ကွယ်လွန်တာ ငါးနှစ်တိတိပြည့်တဲ့နေ့ကအပြီး သတ်အောင်ရေးဘို့ဖြစ်ပေမဲ့ အဆင်မပြေတော့ တဲ့ မျ က်စေ့ကြောင့် ခုမှဆက်ရေးနိုင်လို့ပါ။ တံ ငါ လို ရေ ငုတ် မု ဆိုး လို တော ဝင် ဝေ ဟင် မှာ ငှက် လို ဝဲ ပြီး ရဲ ဝံ့ စွာ လုပ် ကြွေး ချွေး စက် ရှင် အ ဖေ ဘ ဝ ဂ ဃ န ဏ သိ ခဲ့ ပါ ပြီ အ ဖေ ။ သောင်းဝင်3း.7 .17. post by : u thaung win posted on june 28, 2017june 28, 2017facebook မှ post များ (၁) ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေနဲ့ ကျွန်တော် ခဏခဏ စကားများတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးတယ်… ဘာလဲဆိုတော့ ရုံးခန်းပေါ့… အဖေက သူအလုပ်လုပ်လာတဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရုံးခန်းမရှိဘူး… မနက် ၉ နာရီဆိုရင် ရန်ကင်းက တိုက်ခန်းမှာ သူ့တပည့်တွေအားလုံးနဲ့ ဆုံတယ်… သူ့တပည့်တွေအားလုံးပေါင်းမှ ၅ ယောက် ၆ ယောက်ပဲ… အဲ့ဒီ့ထက် တစ်ခါမှ မပိုခဲ့ဘူး…. ဘယ်သူက ဘဏ်သွား… ဘယ်သူက သစ်တောရုံးသွား… ဘယ်သူက သစ်လုပ်ငန်းသွား… ဘယ်သူက ဆိပ်ကမ်း… ဘယ်သူက ဘယ်နေ့ နယ်မှာ သစ်သွားရွေးရမယ်… စသဖြင့် တာဝန် ဝေခြမ်းပေးလိုက်တယ်… ကားလိုမယ့်သူကို ကားထည့်ပေးလိုက်တယ်… အားလုံးကို cdma (ခြင်းဖုန်း) တစ်လုံးစီထည့်ပေးလိုက်တယ်… သူ့တပည့်တွေကလည်း အဲ့ဒီ့ ခြင်းဖုန်းကို သေမလောက်ကြောက်တယ်… ပြေးလို့မရဘူးလေ… လည်ပင်း ကြိုးကွင်းစွပ်ပေးလိုက်တာ… (ဟုတ်တယ်မလား မ moe😛 ) သူကိုယ်တိုင်လည်း သွားစရာရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်… တစ်ခါတစ်လေ driver နဲ့သွားတယ်… အလုပ်များလို့ လူလိုတဲ့နေ့ဆို အဲ့ဒီ့ driver (driver ဆိုပေမယ့် အဖေအားကိုးရတဲ့ manager လိုပါပဲ) ကိုပါ အလုပ်တာဝန်တစ်ခု သီးသန့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ သူ့ဘာသာသူ ကားမောင်းသွားတယ်… သူ့ရုံးခန်းက သူ့ကားပဲ… သူ့ကားနောက်ခန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းကအစ… နေရာအမျိုးမျိုး အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် အဝတ်အစား အမျိုးမျိုး (မြန်မာဝတ်စုံ၊ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ၊ ဘောင်းဘီတို) အကုန်ထည့်ထားတယ်… ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ့တုန်းက ရှိလှ ၅ တန်း ၆ တန်းပေါ့… မြန်မာကားတွေထဲမှာဆို ဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဆိုတာ …. မနက်ဆို… driver မောင်းတဲ့ကားကို နောက်ခန်းက မိန့်မိန့်ကြီးစီးပြီးရုံးလာ… ရုံးရောက်ရင် တံခါးဖွင့်ပေးတဲ့သူနဲ့…. အိတ်ပြေးသယ်ပေးမယ့်သူနဲ့… အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကြီးတွေ ကျကျနနဝတ်… အတာချီကေ့ကြီးဆွဲပြီး ရုံးခန်းထဲဝင်… စုံလည်ထိုင်ခုံကြီးမှာ မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်… ရုံးမှာ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ကိုယ့်စားပွဲနဲ့ ကိုယ် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ်… ဒီလိုမြင်နေကြဆိုတော့.. အဖေ့ကို အမြဲအပြစ်တင်တယ်… အဖေရာ smart ကျကျနေစမ်းပါ… ဒီလိုကြီးနေတာ ရှက်စရာ ကောင်းပါတယ် ဘာညာပေါ့… အတုမြင် အတတ်သင် မြန်မာကားတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုခံရတဲ့ အချိန်ပေါ့… အဖေကတော့ ဘာမှမပြောပါဘူး ခပ်ပြုံးပြုံးပါပဲ… သူက တစ်ခုတော့ အမြဲပြောတယ်… ငါ့ကားက ငါ့ရုံးခန်းပဲ… ကြိုက်တဲ့နေရာသွား… ကြိုက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းလို… ငါနဲ့မကွာအမြဲပါတယ်တဲ့… မိဘဆိုတော့လည်း ပြန်မပြောသာတော့ ဒီလိုပဲ နေလာခဲ့လိုက်တယ်… အခုကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အခါမှာတော့ သူဘာလို့ ရုံးခန်း မထားခဲ့လဲ ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း နားလည် သဘောပေါက်လာတယ်… ကိန်းကြီးခနန်းကြီးနိုင်ဖို့ထက်… လုပ်ငန်းလည်ပါတ်ဖို့… လုပ်ငန်းထိရောက်ဖို့က ပိုအရေးကြီးကြောင်းနားလည်လာတယ်… ရုံးခန်းငှားရင် ရုံးခန်းငှားခတွေ တက်မယ်… မီတာခတွေ… ရေခတွေ… အခြားဗာဟီရတွေတက်မယ်… ဝန်ထမ်းတွေ များရင် ဝန်ထမ်းစားရိတ်တွေ ထောင်းမယ်… စီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့ ပူရတာ တစ်ဘက်… ဝန်ထမ်းတွေအတွက် လစာဆိုတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ထမ်းရတာ တစ်ဘက်နဲ့ ပိုရုန်းရမယ်… အဲ့လိုတွေ အပိုကုန်စရာများလာရင်.. ကိုယ်ရမယ့် အမြတ်ထဲက ပဲ့ပါမယ်… အမြတ်ထဲက ပဲ့ပါရင် မိသားစုအထိနာမယ်… လုံးဝကြီး ဒီလိုရုံးခန်းတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ မလိုဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး… လုပ်ငန်းအကြီးကြီးတွေ လုပ်ရင်တော့ လိုတာပေါ့…. ခန်းညားတဲ့ ရုံးခန်းတွေ… များပြားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းလည်ပါတ်ဖို့ရော… အဟန့်အနေနဲ့ရော မဖြစ်မနေပေါ့… ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းလေးကဖြင့် ခပ်သေးသေး… အလုပ်ထက် ဟန်ကိုယ်ဖို့ ပိုများတယ်ဆိုရင် တော့ဖြင့်… ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာသလိုဖြစ်မှာပါ… ဒီသဘောတရားတွေဟာ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပိုအားကောင်းလာတယ်… အရင်က ဈေးရောင်းရင် ဆိုင်ဖွင့်ရတယ်… အခု online တွေက ရောင်းကြတယ်… ထိရောက်မှုခြင်းလည်း ကွာသလို… ကုန်ကျစားရိတ်လည်း အများကြီးကွာသွားတယ်… ဆိုကြပါစို့ အရင် နာမည်ကြီး လှည်းတန်းက go show မှာ အင်္ကျီတစ်ထည် ဝယ်ချင်ရင်… go show ကို သွားရမယ်… နယ်ကလူတွေဆို ရန်ကုန်ကို လူကြုံမှာရမယ်… ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်ရောက်မှ ဝယ်ရမယ်… ဘာပစ္စည်းတွေရှိလဲ သိချင်ရင်လည်း သိခွင့်မရ… အခု online shopping တွေ ပေါ်လာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး ကြိုက်တဲ့နေရာက ကြိုက်သလို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်တယ်… ရောင်းတဲ့သူဘက်ကလည်း အိမ်မှာထိုင်ပြီး ရောင်းနေရုံပဲ… ဆိုင်ခန်းငှားခလည်း မကုန်ဘူး… ဝန်ထမ်းခလည်း မကုန်ဘူး… အများဆုံးကုန်လှ delivery လုပ်ပေးတဲ့သူခနဲ့…. ပစ္စည်းလွှဲခပေါ့… ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်…. စနစ်နဲ့အညီ လိုက်လျောညီထွေစွာ ကျင့်ကြံသင့်တယ်ဆိုတာလေးကို ပြောချင်တာပါ…. သံသရာ တစ်ပါတ်လည်တယ်ပဲ ဆိုဆို… အခုဆို ဘယ်သွားသွား ကျွန်တော့် အလုပ်အိတ်ပါတယ်… အိတ်ထဲမှာ laptop, charger, hard disk (အစုံ), tablet, စာရွက်စာတမ်း အကုန်ထည့်ထားတယ်… လေးတာမှ နင့်နေတာပဲ… လေးတယ်…. ဒါမှမဟုတ် ရှုပ်တယ်ဆိုပြီး တစ်ခုခု ချန်ထားခဲ့ဖို့ မစဉ်းစားလေနဲ့… ချန်ထားခဲ့တဲ့နေ့ဟာ အဲ့ဒီ့ချန်ထားခဲ့တဲ့ ပစ္စည်း သေချာပေါက်လိုတဲ့နေ့ပဲ… ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွေ့ … အလုပ်စကားပြောလို့ရတယ်… presentation လုပ်လို့ရတယ်… တစ်ခါထဲ deal အပြတ်ဖြတ်လို့ရတယ်… ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိလို့… အဖေ့လို ငါ့ကားက ငါ့ရုံးခန်းလို့မပြောနိုင်သေးပေမယ့်… သေချာတာတစ်ခုကတော့… ငါ့လက်ဆွဲအိတ်ဟာ ငါ့ရုံးခန်းလို့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ တွေ့တဲ့သူတိုင်းကို ကျွန်တော် ပြောဖြစ်တတ်ခဲ့ပြီလေ… post by : pyiet oo aung posted on june 26, 2017july 4, 2017sm entertainment ရဲ့ အနုပညာသတင်း နောက်ဆုံးရ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြပါရစေ။ sm entertainment ဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့  ထိပ်တန်း ဖျော်ဖြေရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်မျာအကြား ရေပန်းစားတဲ့ exo, nct, girl generation, super junior, shinee, f(x), red velvet အစရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော် တေးဂီတအဖွဲ့တွေကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့ ပေးလျှက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ အားလုံး သိပြီးကြပြီဖြစ်ပါသည်။ sm entertainment မှ အနုပညာရှင်များရဲ့ အတွင်းရေး အပြင်ရေး ကိစ္စမှ အစ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုင်းစီကို စက္ကန်မလပ် အသေးစ်ိတ်စောင့်ကြည့်နေသူများလည်းရှိနေပါသည်။ သတင်းချည်းသက်သက် စောင့်မျှော်နေသူများသာမက ကောလဟာလွှင့်ချင်သူများကပါ အချိန်ပြည့် နားစွင့်ခံနေရသော entertainment တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က အနုပညာရှင်တစ်ချို့  တွဲခုတ်နေသော သတင်းတစ်ချို့ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ထင်ကြေးပေးနေကြသော သတင်းသဲ့သဲ့ကြားရသမျှ အငမ်းမရလိုက်လံ ဖမ်းယူအသံလွှင့်ချင်နေသူများကိုလည်း တွေ့နေရပါသည်။ ထိုအနုပညာရှင်များ၏ ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေမှုများ၊ လှုပ်ရှားမှုများကို တွေ့ချင်မြင်ချင်ကြသော ပရိတ်သတ် အင်အားမှာလည်း မနည်းလှချေ။ သို့သော် ယခုနောက်ဆုံးရသတင်းတွင် sm entertainment သည် အဖွဲ့အစည်းလက်အောက်ရှိ အနုပညာရှင်များ၊ ၀န်ထမ်းများနှင့် အတူ ဂျယ်ဂျူကျွန်းသို့ workshop တစ်ခုအနေနှင့် သွားခဲ့ပါသည်။ workshop ဟုဆိုသော်လည်း တစ်နှစ်တာပတ်လုံး ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသော အနုပညာရှင်များနှင့် ၀န်ထမ်းများကို အပျော်ခရီးပေးထွက်သည့် သဘောပင်ဖြစ်သည်။ ယခင်နှစ်ကလည်း ဟာဝိုင်အီသို့ ခရီးထွက်ခဲ့ကြပြီး အဖွဲ့သားအားလုံးအတွက် ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးငှားပေးခဲ့သည်ဆိုသော် သတင်းများထွက်လာခဲ့သည်။ ယခုအခါလည်း ယခင်နှစ်ကဲ့သို့ အပန်းဖြေခရီးထွက်ကြခြင်းပင်။ ad by noon vr myanmar ရေကူး၊ ရေလွှာလျှောစီး နှင့် အခြားသော ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဂိမ်းများကို company ရှိ အနုပညာရှင်များ ၀န်ထမ်းများ စိတ်ကြိုက်ဆော့ကာ အပမ်းဖြေ အနားယူစေရန်အတွက် စီစဉ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် company မှ လူများအားလုံးပျော်ပါးနိုင်ရန် ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှ အထင်ကရ နေရာဖြစ်သည့် ဂျယ်ဂျူကျွန်းကို ရွေးခဲ့ကြဟန်တူသည်။ ဇွန်လ ၁၄ ရက်မှထုတ်ပြန်ထားသော သတင်းများအရ အနုပညာရှင်များ အပါအ၀င် ၀န်ထမ်းပေါင်း ၉၀၀ ကျော်အတွက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ စီစဉ်ပေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရပါသည်။ အမှန်တကယ် sm entertainment ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒေသတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်စေရန်၊ နိုင်ငံခြားမှ ခရီးသွားများတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ဂျယ်ဂျူကျွန်း၏အလှတရာများကို လူများပိုမိုသိလာစေရန်အတွက် စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ယခုတစ်ခေါက်တွင် nct, exo, snsd, red velvet နှင့် တခြား အဖွဲ့များ company ၀န်ထမ်းများ၊ သရုပ်ဆောင်များ၊ မော်ဒယ်များကိုပါ အနားယူလိုက်ပါခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပရိတ်သတ်များကလည်း ရုတ်ရုတ်သဲသဲနှင့် ကိုယ့် idol သူ့ idol အပြိုင်အဆိုင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကြလွန်းသဖြင့် အနုပညာရှင်များမှာမလွတ်မလပ်သဖြင့် ဓါတ်ပုံမရိုက်ကြရန် တောင်းဆိုယူရသည်အထိပင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ exo မှ baek hyun ဆိုလျှင် fan တွေအား “ကိုယ် ဒီကို အပန်းဖြေဖို့အတွက်လာခဲ့တာပါ. ကြည့်လို့လဲမကောင်းနေပါဘူး..ပြီးတော့ မင်းတို့လေးတွေ ဒီလိုပုံတွေရိုက်နေတာ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်.. မင်းတို့လေးတွေ ချစ်ကြလို့ ဒီလိုလုပ်မှန်းသိပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီအတိုင်ေးလးပဲ ထားထားပေးပါလား” ဟု instagram post တွင် comment ရေးသားပြီး တောင်းဆိုခဲ့ရပါသည်။ တခြားလိုက်ပါကြသူ အနုပညာရှင်များကလည်း social media များတွင် fan များ အပျော်ကူးစက်စေရန် ပုံများဝေမျှခဲ့ကြပါသည်။ ကဲ .. စာဖတ်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးရော အခုလို ပျော်စရာကောင်းသည့် ခရီးမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲချင်စိတ်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်နော်။ အောက်မှာ အနုပညာရှင်တွေ ဝေမျှခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်.. အားလုံး ပုံလေးတွေကြည့်ရင်း ကိုယ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်နဲ့တူတူ လိုက်ပါစီးမြောခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ post by : chan myat noe ဒါကတော့ exo က xiumin နဲ့ nct က mark ပါ ဒါကတော့ girl generation အဖွဲ့မှ yoona ရဲ့ ig မှာတင်ထားတဲ့ပုံလေးပါ .. acc name လေးတွေလဲပါလို့ မသိသေးတဲ့သူများ အမြန်ပြေးလို့ follow လုပ်လိုက်ကြရအောင်လား . ရယ်စရာလဲကောင်း ပျော်စရာလဲ ကောင်းမှာ အသေအချာပဲနော် .. လူတွေလည်း အများကြီးပဲ ဒါကတော့ အုပ်စုလိုက်ကြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါ ဒါကတော့ exo က xiumin နဲ့ nct က mark ပါ ဒါကတော့ baek hyun ကနေ ဓာတ်ပုံတွေမရိုက်ကြတော့ဖို့ တောင်းဆိုထားတာလေးပါ .. posted on june 23, 2017june 23, 2017e.x.o အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ d.o. ရဲ့ history and career life (as an actor ) အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့သူကတော့ exo အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ d.o. ပဲဖြစ်ပါတယ်။ stage name – d.o. (디오) birth name – do kyung soo (디경수) birthday – january 12, 1993 height – 173 cm blood type –afavourite colour – black position – main volcalist -d.o. ကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ goyang မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ -d.o. သည် မူလတန်းကို goyang poongsan မူလတန်းကျောင်းမှအောင်မြင်ခဲ့ပြီး အလယ်တန်းကို baekshin အလယ်တန်းကျောင်းနှင့် အထက်​တန်းကို baekseok အထက်​တန်းကျောင်းမှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ – သူ့မှာ do seungsoo လို့ခေါ်တဲ့ သုံးနှစ်ကြီးတဲ့အကိုတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ – d.o. ဟာ ဂီတကိုမူလတန်းကတည်းကဝါသနာပါခဲ့ပြီး သူအထက်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေသတွင်းအဆိုပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိခဲ့ပြီး s.m. entertainment ကကျင်းပတဲ့ audition မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အကြံပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ – d.o. ဟာ2010 ခုနှစ် s.m. audition မှာ na yoon kwon ရဲ့ anticipation ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ brown eyed soul ရဲ့ my story ဆိုတဲ့သီချင်းတွေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ audition မှာရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး s.m. ရဲ့သင်တန်းသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ ရွေးချယ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ သူကအထက်တန်းပြီးဖို့ နှစ်နှစ်ကျန်ပါသေးတယ်။ – d.o. က အရမ်းအေးတဲ့သူပါ။ s.m. လို entertainment ကြီးက audition အောင်မြင်ခဲ့တာတောင်မှ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအသိမပေးခဲ့ပါဘူး ( ကိုယ်သာဆို တိုင်းသိပြည်သိပတ်ကြွားမှာ :3 ) -training ကာလ နှစ်နှစ်ကြာအပြီးမှာ d.o. ကို exo အဖွဲ့ရဲ့ ရှစ်ယောက်မြောက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ january 30, 2012 မှာ debut လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ – d.o. ဟာ exo အဖွဲ့ရဲ့ main vocalist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ exo အဖွဲ့ကို 2013 ခုနှစ် april 8 ရက်နေ့မှာ mama ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ offical debut ပေးခဲ့ပါတယ်။ – သူ့ရဲ့ power (exo characteristic supernatural power ) ကတော့ earth ဖြစ်ပါတယ်။ d.o. ကအရမ်းအသန့်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းဖော်တွေညစ်ပတ်နေရင်လည်း အမြဲပွစိပွစိပြောတတ်ပြီး member တွေကို တစ်ခါတလေမှာ ဟင်းချက်ကျွေးတတ်လို့ သူ့ကိုအမေလို့လည်း စပြီးခေါ်ကြပါတယ်။ -d.o. ဟာ အဆိုပိုင်းတွင်သာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းတွင်ပါထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ -2012 ခုနှစ်မှာ sbs ကရုပ်သံကရိုက်ကူးတဲ့ to the beautiful you ဆိုတဲ့ tv series စတင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ -2014 ခုနှစ် စက်​တင်​ဘာလမှာ cart ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ အရန်အဖြစ်နဲ့စတင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ exo အဖွဲ့က d.o. ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့မဟုတ်ဘဲ သူရဲ့နာမည်ရင်းဖြစ်တဲ့ do kyungsoo ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီး သရုပ်ဆောင်ဘဝကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ – cart ဇာတ်ကားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူဟာ it’s ok, that’s love ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 51 ကြိမ်မြောက် baeksang arts award ဆုပေးပွဲမှာ the best new artist and popularity award အတွက် လျာထားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။2014 ခုနှစ်ရဲ့ idol- actors အယောက်လေးဆယ်ထဲမှာ d.o. က no.1 နေရာရခဲ့ပါတယ်။ – 2015, june မှာတော့ d.o. ဟာ kbs ရုပ်သံကရိုက်ကူးတဲ့ hello monster ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားတွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ချီးကျူးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။november 2015 မှာ အဲ့ဒီကားနဲ့ပဲ 52nd grand bell awards မှာ best supporting actor award အဖြစ် လျာထားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ -exol အားလုံးသိကြတဲ့ exo next door ဆိုတဲ့ tv series မှာလည်း 2015 ခုနှစ်မှာ exo members တွေနဲ့အတူ lead role ကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ – 2016 , february မှာ မင်းသမီး kim so hyun နဲ့တွဲပြီး pure love ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ -2016, october 31 ရက်နေ့မှာစတင်ပြသတဲ့ be positive ဆိုတဲ့ web drama တစ်ခုမှာ မင်းသမီး chae seo jin နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ web drama series ကို samsung ကနေရိုက်ကူးတာဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုနှုန်းအများဆုံး web drama အဖြစ်နဲ့စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ -2016, november မှာ မင်းသားကြီး jo jung suk ၊ မင်းသမီး park shin hey တို့နှင့်အတူ my annoying brother ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကားအတွက် နောက်ခံသီချင်းဖြစ်တဲ့ don’t worry ဆိုတဲ့သီချင်းကိုလည်း jo jung suk နဲ့အတူတွဲပြီးသီဆိုခဲ့ပါတယ်။ -d.o. က the underdog ဆိုတဲ့ animation ကာတွန်းကားမှာလည်း အသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။ -သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး 2014 ခုနှစ်မှာ 16th seoul international youth flim festival မှာ it’s ok, that’s love ဇာတ်ကားနဲ့ best yong actor ဆုရခဲ့ပါတယ်။3rd apan star awards ဆု​ပေးပွဲမှာ it’s ok, that’s love ဇာတ်ကားနဲ့ပဲ best new actor ဆုရခဲ့ပါတယ်။ – 2016 မှာ max movie best films awards ဆု​ပေးပွဲမှာ rising star ဆုကိုရခဲ့ပြီး 52nd baeksang arts awards ဆု​ပေးပွဲမှာ pure love ဇာတ်ကားနဲ့ most popular actor ဆုကိုရခဲ့ပါတယ်။ -အခု 2017 မှာလည်း my annoying brother ဇာတ်ကားနဲ့ 53rd baeksang arts award မှာ most popular actor ဆုကိုရခဲ့ပါတယ်။ -ဒီနှစ်ထဲမှာပြသမယ့် room no.7 ဆိုတဲဇာတ်ကားမှာလည်း shin ha kyun နဲ့အတူ lead actor အဖြစ်နဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ -2017, may 8 ရက်နေ့က swing kids ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ d.o. က ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ s.m. entertainment က ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာ သူကမြောက်ကိုရီးယားစစ်သား ro ki soo ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ရမှာပါ ။ စစ်သားပုံစံနဲ့သူ့ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပြီး op တော့ ရင်ခုန်နေပါပြီ သူ့ကို nominated လုပ်ခြင်းခံထားရတဲ့ award တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ d.o. ဟာဆိုရင် သူနဲ့အတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့သူတိုင်းရဲ့ ချီးကျူးခြင်းကိုအမြဲခံရတဲ့သူပါ။ သူနဲ့အတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းက သူ့ကိုနွေးထွေးဖော်ရွေပြီး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အနုပညာလောကထဲကိုဝင်လာတာ ငါးနှစ်ကျော်ပဲရှိသေးပေမယ့် အဆိုပိုင်းမှာရော သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါအောင်မြင်နေတဲ့ ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ to the beautiful you ဇာတ်လမ်းတွဲက poster ပါ ဒါကတော့ exo next door ဇာတ်လမ်းတွဲက poster ပါ ❤ ဒါကတော့ cart ဇာတ်ကားရဲ့ poster လေးပါ ဒီပုံလေးတွေကတော့ hello monster ဇာတ်ကားမှာ သူပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကပုံလေးတွေပါ ဒါကတော့ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ hello monster ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ poster ပါ ဒါကတော့ my annoying brother ဇာတ်ကားက poster လေးပါ ဒါကတော့ သူ supporting role ကနေ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ it’s ok ,that’s love ဇာတ်ကားရဲ့ poster လေးပါ ဒါကတော့ သူ lead actor အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ pure love ဇာတ်ကားရဲ့ poster လေးပါ post by : eingyin phyu posted on june 23, 2017a blind girl and her love (မြန်မာပြန်) မျက်မမြင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ မျက်မမြင်ဘဝဖြစ်လာရတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မုန်းတီးနေမိသလို အခြားသူတွေကိုလည်း မုန်းနေခဲ့တယ်.. သူ့ချစ်သူ ကောင်လေးတော့ သူမုန်းတဲ့ထဲမှာ မပါဘူးပေါ့.. ကောင်လေးဟာ မျက်မမြင်ကောင်မလေးဆီ နေ့တိုင်းလာပြီး အားပေးစကားတွေပြော၊ ဝေယျာဝိစ္စလေးတွေလုပ် နဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေးချစ်သူဘဝဟာ သာယာကြည်နူးစရာအပြည့်နဲ့.. ” မေ…” ” ဟင်.. မောင်.. ပြောလေ.. ” ” မောင်လေ… မေနဲ့ လက်ထပ်ပြီး. မေ ဘာဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်.. ဖြစ်ချင်တာ အကုန်လုံး ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးမယ်.. မေ ဘာဖြစ်ချင်လဲပြောလေ.. ” ” မေ့ကို လက်မထပ်ချင်ပါနဲ့ မောင်ရယ်… မေက မျက်စိလည်း မမြင်ဘူး.. မောင့်ကိုတော့ အသည်းနစ်အောင်ချစ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မျက်မမြင်မလေး တစ်ယောက်ကို မောင် လက်မထပ်စေချင်ဘူး ” ” သြော်.. မေရယ်.. မေသာ လက်ထပ်မယ်ဆို မောင် ဘာပဲဖြစ်နေ ဖြစ်နေ အကုန် စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရမယ်. နှော်.. လက်ထပ်ပါရစေ ချစ်လေးရယ် ” ” အင်း.. အဲဒါဆို.. မေလေ.. ကမ္ဘာကြီးကို မေ့မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ရတဲ့နေ့ကျရင် မောင့်ကို ချက်ချင်း လက်ထပ်မယ်သိလား ” အဲလိုနဲ့ ကောင်လေးနဲ့ မျက်မမြင်မိန်းကလေးတို့ ကြည်နူးစရာ ချစ်စကားဆိုကြပြီး ၄/၅ ရက်လောက် မျက်မမြင်မိန်းကလေးဆီ ရောက်မလာတော့ဘူး… မျက်မမြင်မိန်းကလေးကတော့ ” သြော်.. ယောင်္ကျားတွေများ ရက်စက်လိုက်တာ.. မျက်မမြင်မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘယ်တော့မှ မျက်စိမြင်လာစရာလည်းမရှိတော့ဘူး၊ မျက်စိမမြင်ရင် သူ့ကို လက်မထပ်ဘူး ဆိုတာလဲသိရော.. ပေါ်ကို မလာတော့ဘူး.. ရက်စက်လိုက်တာ မောင်ရယ်.. မေက မောင့်ကို အသည်းနစ်အောင်ချစ်တာပါ.. မေသာ မျက်စိမြင်ရပြီး မောင်သာ မျက်မမြင်ဖြစ်နေလည်း မေကတော့ ချစ်နေမှာပါ.. ” ဆိုပြီး ကြေကွဲနေရှာတယ်.. ” ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်…. ” တံခါးခေါက်သံ.. ဘယ်သူများပါလိမ့်.. ” ဘယ်သူလဲရှင့် ” မျက်မမြင်ကောင်မလေးဟာ ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့ တံခါးသွားဖွင့်လိုက်တယ်.. ” ကျွန်တော်တို့ မျက်စိအထူးကု ဆေးရုံကပါ.. မိန်းကလေးကို မျက်စိအလှူရှင်ပေါ်လာလို့ လာခေါ်တာပါ ” ” ဟုတ်လား.. ဝမ်းသာလိုက်တာရှင်.. ကျွန်မ မျက်စိမြင်တော့မှာပေါ့နှော်.. မောင်ရေ… မေသာ မျက်စိမြင်ရလို့ကတော့ မောင့်ကို မတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီး ချက်ချင်းလက်ထပ်ပါမယ်… ” ဒီလိုနဲ့ မျက်စိအထူးကုဆေးရုံမှာ မိန်းကလေးကို မျက်စိအစားထိုးကုသပြီး ပတ်တီးဖြည်တဲ့နေ့… ဆရာဝန်က ” ပတ်တီးဖြည်မယ်နှော်.. မိန်းကလေး မျက်စိ ပြန်ကောင်းလာရင် ပထမဆုံး ဘာလုပ်မှာလဲ… ” ” ကျွန်မလေ.. ကျွန်မ ချစ်သူဆီ ချက်ချင်းသွားပြီး လက်ထပ်မယ်.. ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် မိဘတွေကို လိုက်ကန်တော့မယ်.. ” ” ကောင်းလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ဗျာ.. ကဲ.. ဖြည်ပြီ…” ဆိုပြီး ပတ်တီးဖြည်လိုက်ပါတယ်.. မိန်းကလေးဟာ အံ့သြမှုတွေနဲ့ အပြည့်ပေါ့.. မျက်စိပြန်မြင်ရပြီ.. ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေက သူ့ကို ပြုံးပြီး ကြည့်နေကြတယ်… မိန်းကလေးဟာ ချက်ချင်း ဆေးရုံပေါ်ကနေ ပြေးဆင်းလာခဲ့ပြီး ကားတစ်စီးငှားပြီး ချစ်သူကောင်လေးအိမ်ကို လိုက်သွားခဲ့တယ်… ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ အိမ်လိပ်စာကို သိနေခဲ့ပေမယ့် ကောင်လေးအိမ်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးပါဘူး.. သူ့ကောင်လေး အသံကိုပဲကြားဖူးပြီး ကောင်လေးကိုလည်း တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး… ” သူ့အိမ်ရောက်ရင်တော့ တံခါးခေါက်မယ်.. ပြီးရင် မောင်ရေ မေလာပြီ လို့ အော်ပြီး မလွတ်တမ်းဖက်ထားမယ် “.. ကားပေါ်မှာ မိန်းကလေး စိတ်ကူးလေးယဉ်နေတုန်း. ” အစ်မပြောတဲ့ လိပ်စာနဲ့အိမ်ဟာ ဒီအိမ်ဗျ.. ရောက်ပါပြီခင်ဗျာ.. ” မိန်းကလေးလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်းလှမ်းလာပြီး တံခါးကို ခေါက်လိုက်တယ်.. ” ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် … ” ” ဘယ်သူလဲခင်ဗျာ… ” ဒါ မောင့်အသံ.. လုံးဝမှတ်မိတယ်.. ဘယ်ဘဝ ရောက်ရောက် ဘယ်တော့မှ မေ့မသွားနိုင်တဲ့အသံ.. ” မောင်ရေ.. မေလေ.. မေ.. မေ မျက်စိမြင်ရပြီသိလား… ” ” ဝမ်းသာလိုက်တာမေရေ… တံခါးဖွင့်ဝင်ခဲ့လေ… ” ” မေ.. ဘယ်တော့မှ ခွဲမသွားဘူးနှော်… ကဲ .. အခု မေ. မျက်စိမြင်ရပြီဆိုတော့ မောင့်ကို လက်ထပ်မှာမဟုတ်လား ” ပြောရင်း ချစ်သူကောင်လေးဟာ မိန်းကလေးဘက်ကို ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့ လျှောက်လာလိုက်တယ်… ချစ်သူ ကောင်လေးကို မြင်လိုက်ချိန်မှာ မိန်းကလေးဟာ မှင်သက်ဆွံ့အသွားခဲ့တယ်… သူ့ချစ်သူကောင်းလေးလည်း သူ့လိုပဲ မျက်မမြင်လေးပါလား… ” ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း.. လက်မထပ်ဘူး.. မျက်မမြင်ဘဝဖြစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် မုန်းတာ.. ရှင့်လို မျက်မမြင်ကိုလည်း ကျွန်မ လက်မထပ်နိုင်ဘူး… ” ဆိုပြီး ပြေးထွက်သွားတယ်.. ကောင်လေးဟာ တံခါးဝမှာရပ်ရင်း မိန်းကလေး ထွက်သွားတယ်လို့ထင်ရတဲ့ဘက်ကို လှည့်ပြီး ကြေကြေကွဲကွဲနဲ့တီးတိုးပြောလိုက်တယ်.. ” မောင့်ကို လက်မထပ်ရင်တောင် မောင့်မျက်လုံးလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပါ ချစ်ရေ.. ”ablind girl and her love ကို မြန်မာမှုပြုထားပါသည်။ #maungpauk posted on june 22, 2017bloody reunion (2006) movie review ကျနော် ကိုယ်တိုင် ဒီဇတ်လမ်းအစကို အင်မတန် ရှုပ်ထွေးသွားပါတယ် နားမလည်တော့ဘူး မကြည့်ချင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာပါဘူး နက်နဲ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ လျို့ဝှတ်ချက်တွေကို မသိချင်ပဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ပြီး အသက်ရှုရပ်မတန့် ဆက်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ korea ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ကျောင်းဆရာမဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆရာမပတ်ခ် ဟာ အသက်ကြီးပြီး နာမကျန်းဖြစ်နေလို့ သူမ တပည့်ဖြစ်သူ နမ်မီဂျား မှ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေရပါတယ်။ ဆရာမ ရောဂါက ပိုမိုပြင်းထန်လာတဲ့ အခါ နမ်မီဂျား မှ ဆရာမ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ တပည့်တစ်ချို့ကို ဆရာမ နေထိုင်ရာ ဆီသို့ ဆုံတွေ့ကြရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတော့တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တပည့်များ နှင့် ပျော်ရွှင်စွာ တွေ့ဆုံရင်း ငယ်ငယ်က အဖြစ်အပျက်များကို ပြန်ပြောင်းအောင်းမေ့ရင်း ဆရာမပတ်ခ် စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမ တပည့် ထဲက တစ်ချို့တော့ ရောက်လာကြပါတယ် ဂျောင်ဝူး ၊ မြောင်ဟို ၊ ဆန်ဟီး ၊ ဒယ်ဗြောင် ၊ စီဟို ၊ အန်ယောင်း တို့ ဖြစ်ပြီး သူတို့ လာရင်း ကိစ္စတွေမှာ လျို့ဝှတ်ချက် ကိုယ်စီ ပါလာကြပါတယ် ဘယ်လိုပဲ သူတို့ ရောက်လာလာ ဆရာမ ပတ်ခ် ကတော့ တပည့်တွေကို မြင်လို့ ပြုံးပျော်နေပါတော့တယ်။ သို့ပေမယ့် ထို ပျော်ရွှင်ခြင်းက နောက်နေ့ မကူးခင်မှာပဲ ထို ဆရာမပတ်ခ် နှင့် တပည့်တွေ အပေါ် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး ရက်စက်မှုများ ကျရောက်လာတော့မယ့် အခါမှာတော့။ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ ထိတ်လန့်သည်းဖို သွေးထွက်သံယိုတွေ ပါတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး အသဲငယ်တဲ့ သူတွေ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ မကြည့်သင့်ပါဘူး။ imdb 6.1/10 ထိ ရရှိထားပြီး horror အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ min pyae sone ဖြစ်ပြီး channel myanmar ကနေ မြန်မာစာတန်းထိုး နှင့် တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ #thitsankhant posted on june 21, 2017lost & found (2016) movie review adventure အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကြိုက်သူတွေ အတွက် သင့်တော်တဲ့ရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်ပါတယ် အန်ဒီ ဟာ ကျောင်းမှာ ရေကူးအားကစား မှာ ထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျခိုက် အပေါင်းအသင်းမှားကာ စတိုးဆိုင်တစ်ခုကနေ ပစ္စည်းခိုးယူ၍ ရဲတိုင်ခံခဲ့ရပါတယ် ထို့နောက် ၀န်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရပြီး အန်ဒီ ဖခင် မှ အန်ဒီ ဦးလေး ဖြစ်သူ ထရန့်ဝေါ်တန် ရှိသော ကျွန်းတစ်ခုသို့ အန်ဒီ ၏ ညီ မိုက်ခ် နှင့် အတူ အလည်အပတ် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်… ထို ကျွန်းသို့ ရောက်သော အခါ ဝေါ်တန် မျိုးရိုးသည် ချမ်းသာခဲ့ပြီး လူယုတ်မာများ လက်ချက်ဖြင့် အန်ဒီ တို့ အဖိုး ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး မိသားစုပိုင် ပစ္စည်းများ အစ ပျောက်သွားသည်ကို သိရှိရကာ ဝေါ်တန် တို့ရဲ့ အမွေ အနှစ်ကို ပြန်လည်ရှာဖွေ ရန် အဖိုးဖြစ်သူ ထားခဲ့သော ၀ှက်စာများမှ တဆင့် အစ ဖော်ရာ တွေ့ရှိဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပြီး အန်ဒီ တို့ အဖိုး အစပျောက်အောင် ဖန်တီးပြီး ပစ္စည်းများကို တိတ်တိတ်လေး ရှာဖွေ နေသူမှာ အန်ဒီ ၏ ရည်းစား ကလဲရာ ရဲ့ အဖေ ဘရိုမန်း ဖြစ်နေသည်ကို သိရှိခဲ့ကြသော် အခါ…. ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ imdb 5.3/10 ရရှိထားပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇတ်လမ်းဆင်ထားပါသည် www.channelmyanmar.org တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ #thitsankhant posted on june 21, 2017june 21, 2017pudding monsters (android & ios) game review android & ios game ဆော့ရတာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူတွေ အတွက် game ကောင်းလေး တစ်ခု နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျနော့်လို mobile game ဆော့ရတာ အင်မတန်ပျင်းတဲ့ သူတောင် ဆော့ရတာ ပျော်တဲ့ ဂိမ်းကတော့ pudding monsters လို့ ခေါ်တဲ့ android mobile game ဖြစ်ပါတယ်။ game ပုံစံကတော့ jelly pudding လေးတွေဟာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ အစားမခံရအောင် အိပ်ပျော်နေတဲ့ တစ်ခြား jelly pudding တွေ နဲ့ ပြန်လည်စုစည်းပြီး လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ရမယ့် ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ အတားအစီးလေးတွေ ကြားကနေ pudding တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက လက်လေးတွေနဲ့ ရွေ့ပြီး ပေါင်းစည်းပေးရမှာ ဖြစ်သလို သူပြထားပေးတဲ့ star လေးတွေ နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ခဲ့ရင်3star အထိ ရရှိမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 125 levels အများကြီးပါတော့ ဆော့ရတာ မရိုးပဲ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ puzzle game အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ် game ကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ developer ကတော့ cut the rope လို puzzle game တွေ နဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ zeptolab ကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ game ကို ဆော့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ google account (or) apple id ရှိရမှာဖြစ်ပြီး မိမိ ဖုန်းက app store (or)play store app မှ တဆင့် ၀င်ရောက် ရှာဖွေ download ဆွဲ ၍ ဆော့နိုင်ပါတယ် အကယ်၍ ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် အောက်ပါ link ကို နှိပ်၍ download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ download ios —-> https://goo.gl/d32dsg download android —-> https://goo.gl/84nnc8 posted on june 20, 2017resident evil: vendetta (2017) review wow… လို့ အရင်ပြောပါရစေ… resident evil: the final chapter နဲ့ ဂျင်းသိပ်ခံရတာတွေ ဒီ animation movie နဲ့ ပြန်ဖြေသိမ့်လိုက်ရတယ်… imdb 7.1/10 ထိရထားတယ် ဆိုရင် သိလိုက်တော့… ကိုယ်တွေ လွမ်းနေတဲ့ ခရစ် ပါမယ် ရေဗက္ကာ ပါမယ် လီယွန် ပါတယ် ဇတ်လမ်းက နည်းနည်းတော့ game ဆန်မယ် ကိုယ်တွေက game အဆော့များလို့လား မပြောတက်ပေမယ့် game story နဲ့ နဲနဲသွားဆင်နေတယ် သိပ်မကြာသေးခင်က ထွက်ရှိထားတဲ့ resident evil 7: biohazard (game) လိုမျိုး ဇတ်လမ်း ကြိုမသိနိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုး နဲ့ ဇတ်သိမ်းသွားတယ်… အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ရမယ်ရှာပြီး ဆွဲဆန့်ထားတဲ့ resident evil ဇတ်လမ်းတွေဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ချာလာပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း japan က game နဲ့ animation တွေဟာ ဖန်တရာတေနေတဲ့ umbrella corporation ကို တစ်ဖြေးဖြေး ကျနော်တို့ဆီကနေ အစဖျောက် ဆွဲထုတ်သွားခဲ့ပါပြီ…. အရင်က umbrella ရဲ့ ဖော်မြူလာက တစ်ဦး ကနေ တစ်ဦး ကိုက်ပြီး သတ်ဖြတ်ပြီး ကူးမယ် အသိဥာဏ်မဲ့ပြီး သွေးနံ့ရသမျှ ကိုက်မယ် ဆိုတာတွေ အခု ဗီလိန် အသစ် အေရိစ် ရဲ့ လက်ထပ် မှာ တစ်မျိုးပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီ သူကမှ တကယ့်စစ်တပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်နိုင်ပါတယ်… အေရိစ် ဟာ ဗိုင်းရပ်စ် ဖော်မြူလာ ကို ထပ်ပြီး ဆန်းသစ်ကာ zombie တွေကို ထိန်းချူပ်နိုင်တဲ့ ဖော်မြူလာ အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်.. အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ တကယ့် zombie တပ်ဖွဲ့ကို ဖန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တာပါ…. ဇတ်လမ်းကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ အမြည်းအဖြစ် မပေးနိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ကျနော့် လက် နဲ့ ရေးမပြနိုင်ချင်လောက်အောင် ကျနော့် ရဲ့ ၀ါသနာတူ resident evil fan တွေကို ခံစားစေချင်လို့ resident evil အားလုံးကို မလွတ်တမ်း ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ channel myanmar translator tariq l walker ကနေ မြန်မာစာတန်းထိုး နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ download ဆွဲကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ… ပြီးရင် ကျနော် ညွှန်းထားသလို ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပေါ့… #thitsankhant posts navigation page 1 page2next page search search for: search archives july 2017 (2) june 2017 (9) categoriesactor (3) book (2) entertainment (2) facebook (2) game review (1) korea (3) movie review (3) home facebook twitter instagram email proudly powered by wordpressHere you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.Words density analysis:Numbers of all words: 3006One wordTwo words phrasesThree words phrasesး - 51.56% (1550)က - 41.75% (1255)မ - 31.17% (937)န - 22.26% (669)အ - 18.03% (542)့ - 13.11% (394)ပါ - 10.28% (309)မှ - 6.89% (207)င်း - 6.59% (198)တယ် - 6.49% (195)။ - 6.29% (189)ကို - 6.19% (186)လို - 5.59% (168)သူ - 5.12% (154)တွေ - 4.76% (143)တော - 4.59% (138)မှာ - 4.49% (135)… - 4.46% (134)ဘ - 4.13% (124)မျ - 4.09% (123)ရေ - 3.89% (117)ပြီ - 3.59% (108)ပါတယ် - 3.46% (104)ဝ - 3.39% (102)တော့ - 3.36% (101)နဲ့ - 3.16% (95)ု - 2.99% (90)ပြီး - 2.96% (89)ကျ - 2.43% (73)ဂ - 2.36% (71)များ - 2.23% (67)ရင် - 2.16% (65)သိ - 2.06% (62)မေ - 2.03% (61)ဟာ - 1.96% (59)ဒီ - 1.86% (56)ရဲ - 1.8% (54)ရှိ - 1.73% (52)ဖေ - 1.7% (51)လို့ - 1.7% (51)လည်း - 1.56% (47)ရဲ့ - 1.56% (47)” - 1.56% (47)လုပ် - 1.46% (44)ခဲ့ - 1.46% (44)သည် - 1.36% (41)ဘူး - 1.33% (40)ဝင် - 1.23% (37)တို့ - 1.2% (36)ရှင် - 1.16% (35)နှစ် - 1.16% (35)တွေက - 1.13% (34)ကတော့ - 1.13% (34)တဲ့ - 1.13% (34)လက် - 1.06% (32)ကိုယ် - 1.03% (31)ဒါ - 1.03% (31)သား - 1.03% (31)အစ - 1% (30)ယောက် - 1% (30)အဖေ - 1% (30)ငါ - 0.96% (29)ဖြစ်ပါ - 0.9% (27)post - 0.86% (26)၊ - 0.86% (26)ထိ - 0.86% (26)– - 0.8% (24)သူ့ - 0.77% (23)မောင် - 0.73% (22)အဖြစ် - 0.73% (22)ဆိုတဲ့ - 0.7% (21)တစ်ခု - 0.7% (21)ဖြစ်ပါတယ် - 0.67% (20)ကျနော် - 0.63% (19)ူ - 0.63% (19)2017 - 0.63% (19)တွေကို - 0.6% (18)d.o. - 0.6% (18)အတွက် - 0.57% (17)ဟု - 0.57% (17)game - 0.53% (16)ရန် - 0.53% (16)မိန်းကလေး - 0.53% (16)တန်း - 0.53% (16)ပစ္စည်း - 0.53% (16)ကျေ - 0.53% (16)မျက်စိ - 0.5% (15)exo - 0.5% (15)ဏ - 0.5% (15)man - 0.5% (15)လေးတွေ - 0.5% (15)ဦး - 0.5% (15)ားကို - 0.47% (14)တွင် - 0.47% (14)သူမ - 0.47% (14)running - 0.47% (14)နောက် - 0.47% (14)ငွေ - 0.47% (14)ဈေ - 0.47% (14)ဖြစ်ပါတယ်။ - 0.47% (14)ပွဲစား - 0.43% (13)june - 0.43% (13)…. - 0.43% (13)သူက - 0.43% (13)ဆီ - 0.4% (12)စက် - 0.4% (12)ထို - 0.4% (12)ကနေ - 0.4% (12)ဒါကတော့ - 0.4% (12)ရုံးခန်း - 0.4% (12)အခု - 0.37% (11)ဆိုတာ - 0.37% (11)၅ - 0.37% (11)အခါ - 0.37% (11)ဖြစ်ပြီး - 0.37% (11)အဲ့ဒီ - 0.37% (11)ခုနှစ် - 0.37% (11)သူတို့ - 0.37% (11)actor - 0.33% (10)and - 0.33% (10)လက်ထပ် - 0.33% (10)the - 0.33% (10)posted - 0.33% (10)ဆိုရင် - 0.33% (10)entertainment - 0.33% (10)ဘဲ - 0.3% (9)တပည့် - 0.3% (9)အဖေက - 0.3% (9)love - 0.3% (9)တွေဟာ - 0.3% (9)အားလုံး - 0.3% (9)အတူ - 0.3% (9)san - 0.3% (9)award - 0.3% (9)ဆရာမ - 0.3% (9)ဇာတ်ကားမှာ - 0.3% (9)ယခု - 0.27% (8)သူမျ - 0.27% (8)တံ - 0.27% (8)အနုပညာရှင်များ - 0.27% (8)သူ့ကို - 0.27% (8)၆ - 0.27% (8)တစ်ဦး - 0.27% (8)လေးပါ - 0.27% (8)ထဲက - 0.27% (8)ချစ်သူ - 0.27% (8)ထုတ် - 0.27% (8)ဖြစ်နေ - 0.27% (8)ဇတ်လမ်း - 0.23% (7)poster - 0.23% (7)ဆိုပြီး - 0.23% (7)တာတွေ - 0.23% (7)ပါမယ် - 0.23% (7)နှင့် - 0.23% (7)အဖွဲ့ဝင် - 0.23% (7)နှင့် - 0.23% (7)မိသားစု - 0.23% (7)၉ - 0.23% (7)အန်ဒီ - 0.23% (7)baek - 0.23% (7)ဆွဲ - 0.23% (7)ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ - 0.2% (6)ကြိုက်တဲ့ - 0.2% (6)မှာလည်း - 0.2% (6)her - 0.2% (6)၈ - 0.2% (6)ဆေး - 0.2% (6)မောင့်ကို - 0.2% (6)းမရ - 0.2% (6)star - 0.2% (6)ဒေါက် - 0.2% (6)myanmar - 0.2% (6)ရှိပါပြီ - 0.2% (6)အထိ - 0.2% (6)စွာ - 0.2% (6)review - 0.2% (6)evil - 0.2% (6)resident - 0.2% (6)down - 0.2% (6)book - 0.2% (6)နဲ့အတူ - 0.2% (6)ကျနော်တို့ - 0.17% (5)ဝေ - 0.17% (5)တပည့်တွေ - 0.17% (5)ဝန်ထမ်းတွေ - 0.17% (5)သူတွေ - 0.17% (5)download - 0.17% (5)ဂွမ်ဆူ - 0.17% (5)အရင် - 0.17% (5)၏ - 0.17% (5)pudding - 0.17% (5)အဖိုး - 0.17% (5)ဖြစ်သူ - 0.17% (5)ဟင် - 0.17% (5)page - 0.17% (5)ရှိပါတယ် - 0.17% (5)soo - 0.17% (5)s.m. - 0.17% (5)မု - 0.17% (5)တာဝန် - 0.17% (5)best - 0.17% (5)အဲ့ဒီ့ - 0.17% (5)ဘယ်သူက - 0.17% (5)စီးပွားရေး - 0.17% (5)movie - 0.17% (5)နေတာ - 0.17% (5)monster - 0.17% (5)ကလဲ - 0.17% (5)ချက်ချင်း - 0.17% (5)facebook - 0.17% (5)2016 - 0.17% (5)၍ - 0.13% (4)ကဲ - 0.13% (4)(2) - 0.13% (4)ဆော့ရတာ - 0.13% (4)ကျနော့် - 0.13% (4)တစ်ခုက - 0.13% (4)၀န်ထမ်းများ - 0.13% (4)ခုနှစ်မှာ - 0.13% (4)ဇာတ်ကားနဲ့ - 0.13% (4)မှာတော့ - 0.13% (4)အကုန် - 0.13% (4)awards - 0.13% (4)brother - 0.13% (4)suk - 0.13% (4)shin - 0.13% (4)that’s - 0.13% (4)it’s - 0.13% (4)min - 0.13% (4)nct - 0.13% (4)ညီ - 0.13% (4)-d.o. - 0.13% (4)audition - 0.13% (4)ကျွန်မ - 0.13% (4)ပတ်ခ် - 0.13% (4)android - 0.13% (4)chan - 0.13% (4)ဒါပေမယ့် - 0.13% (4)series - 0.13% (4)july - 0.13% (4)ပွဲရုံက - 0.13% (4)driver - 0.13% (4)ပါဘူး။ - 0.13% (4)ကျွန်တော် - 0.13% (4)hyun - 0.13% (4)girl - 0.13% (4)yoo - 0.13% (4)thit - 0.13% (4)khant - 0.13% (4)ပါလို့ - 0.1% (3)အမျိုးမျိုး - 0.1% (3)ok, - 0.1% (3)ယောင်္ကျ - 0.1% (3)baeksang - 0.1% (3)ခေါ်ကြပါတယ် - 0.1% (3)(3) - 0.1% (3)arts - 0.1% (3)idol - 0.1% (3)ကောင်လေးဟာ - 0.1% (3)cart - 0.1% (3)းချိ - 0.1% (3)ပြီးတော့ - 0.1% (3)မေသာ - 0.1% (3)red - 0.1% (3)eun - 0.1% (3)kyun - 0.1% (3)ပြိုင်ပွဲ - 0.1% (3)မေက - 0.1% (3)you - 0.1% (3)annoying - 0.1% (3)တစ်ခါမှ - 0.1% (3)မင်းသမီး - 0.1% (3)ရှာဖွေ - 0.1% (3)lead - 0.1% (3)ဝေါ်တန် - 0.1% (3)pure - 0.1% (3)ဂန်ဂယ်ရီ - 0.1% (3)drama - 0.1% (3)web - 0.1% (3)ဇာတ်ကားရဲ့ - 0.1% (3)သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ - 0.1% (3)next - 0.1% (3)ပရိတ်သတ် - 0.1% (3)hello - 0.1% (3)company - 0.1% (3)imdb - 0.1% (3)2015 - 0.1% (3)ios - 0.1% (3)ဇာတ်လမ်းတွဲက - 0.1% (3)အရွယ် - 0.1% (3)2017june - 0.1% (3)power - 0.1% (3)သေချ - 0.1% (3)တဲ့။ - 0.1% (3)ပွဲခ - 0.1% (3)channel - 0.1% (3)popular - 0.1% (3)မောင်ရေ - 0.1% (3)name - 0.1% (3)ရွေးချယ် - 0.1% (3)23, - 0.1% (3)ဆု​ပေးပွဲမှာ - 0.1% (3)စာရွက်စာတမ်း - 0.1% (3)ဖော်မြူလာ - 0.1% (3)fan - 0.1% (3)မိန်းကလေးဟာ - 0.1% (3)အမျိုးအစား - 0.1% (3)တခြား - 0.1% (3)တွေအား - 0.1% (3)instagram - 0.1% (3)လှည့်ပြီး - 0.1% (3)မေ. - 0.1% (3)aung - 0.1% (3)seo - 0.1% (3)search - 0.1% (3)ယူဂျယ်ဆော့ - 0.1% (3)ကြီးက - 0.1% (3)story - 0.1% (3)ပြီးရင် - 0.1% (3)ဟားဟား - 0.1% (3)app - 0.1% (3)နှော်.. - 0.1% (3)တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ - 0.1% (3)ဆန်စက် - 0.1% (3)အကြောင်း - 0.1% (3)animation - 0.1% (3)21, - 0.1% (3)#thitsankhant - 0.1% (3)show - 0.1% (3)န်းမာရေး - 0.1% (3)ယခုအခါ - 0.1% (3)နာမည်ကြီး - 0.1% (3)ဘယ်တော့မှ - 0.1% (3)ဆရာမပတ်ခ် - 0.1% (3)2014 - 0.1% (3)ရရှိထားပြီး - 0.07% (2)လီဂွမ်ဆူ - 0.07% (2)အဖေ့ရဲ့ - 0.07% (2)အင်မတန် - 0.07% (2)korea - 0.07% (2)ရုပ်ရှင်ကားကောင်း - 0.07% (2)တစ်ဦးဖြစ်သူ - 0.07% (2)ဆား - 0.07% (2)ဟင့်အင်း - 0.07% (2)noon - 0.07% (2)မေ.. - 0.07% (2)ပွဲရုံတွေ - 0.07% (2)ကောင်လေးကို - 0.07% (2)ဒါပေမဲ့ - 0.07% (2)နမ်မီဂျား - 0.07% (2)ငယ်ငယ်တုန်းက - 0.07% (2)အပေါ် - 0.07% (2)ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ - 0.07% (2)ပါတဲ့ - 0.07% (2)အဖွဲ့သားတွေက - 0.07% (2)manရဲ့ - 0.07% (2)ရွာမှာ - 0.07% (2)ပရိသတ်တွေက - 0.07% (2)အဖြစ်လည်း - 0.07% (2)လျို့ဝှတ်ချက် - 0.07% (2)ဆုန်းဂျီဟို - 0.07% (2)ကင်မ်ဂျုံးဂု - 0.07% (2)evil: - 0.07% (2)kim - 0.07% (2)ကိုယ်တွေ - 0.07% (2)sbs - 0.07% (2)—-> - 0.07% (2)lee - 0.07% (2)မိမိ - 0.07% (2)ဖုန်းက - 0.07% (2)store - 0.07% (2)(၁) - 0.07% (2)ဇတ်လမ်းက - 0.07% (2)တစ်ဖြေးဖြေး - 0.07% (2)တကယ့် - 0.07% (2)twitter - 0.07% (2)မလွတ်တမ်း - 0.07% (2)home - 0.07% (2)zombie - 0.07% (2)ထပ်ပြီး - 0.07% (2)umbrella - 0.07% (2)posts - 0.07% (2)အေရိစ် - 0.07% (2)email - 0.07% (2)(or) - 0.07% (2)လူသိများပါတယ် - 0.07% (2)အိမ်ထောင်ပြုမယ်လို့ - 0.07% (2)တဆင့် - 0.07% (2)အစရှိတဲ့ - 0.07% (2)monsters - 0.07% (2)တို့ရဲ့ - 0.07% (2)ပစ္စည်းများ - 0.07% (2)မြန်မာစာတန်းထိုး - 0.07% (2)အမှန်တကယ် - 0.07% (2)couple - 0.07% (2)monday - 0.07% (2)manမှာ - 0.07% (2)ကောင်းလေး - 0.07% (2)ဂျီဆော့ဂျင် - 0.07% (2)puzzle - 0.07% (2)အောင်မြင်နေတဲ့ - 0.07% (2)ကပဲ - 0.07% (2)လေးတွေဟာ - 0.07% (2)jelly - 0.07% (2)mobile - 0.07% (2)race - 0.07% (2)ခေါ်တဲ့ - 0.07% (2)ပုံစံကတော့ - 0.07% (2)ခေါ်ကြပါတယ်။ - 0.07% (2)သူ့ချစ်သူ - 0.07% (2)သီချင်းနဲ့ - 0.07% (2)ရက်နေ့မှာ - 0.07% (2)အမြတ်ထဲက - 0.07% (2)တက်မယ်… - 0.07% (2)member - 0.07% (2)debut - 0.07% (2)2012 - 0.07% (2)အရင်က - 0.07% (2)online - 0.07% (2)yoon - 0.07% (2)ကာလ - 0.07% (2)အဖွဲ့ရဲ့ - 0.07% (2)နားလည် - 0.07% (2)အခါမှာတော့ - 0.07% (2)အားလုံးကို - 0.07% (2)ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး - 0.07% (2)new - 0.07% (2)မနက် - 0.07% (2)ရုပ်သံကရိုက်ကူးတဲ့ - 0.07% (2)ကိုပါ - 0.07% (2)အကုန်ထည့်ထားတယ်… - 0.07% (2)beautiful - 0.07% (2)စတင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ - 0.07% (2)ငါ့ကားက - 0.07% (2)အဖွဲ့က - 0.07% (2)goyang - 0.07% (2)တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ - 0.07% (2)မင်းတို့လေးတွေ - 0.07% (2)exo, - 0.07% (2)နောက်ဆုံးရ - 0.07% (2): - 0.07% (2)content - 0.07% (2)nct, - 0.07% (2)ဒေသတွင်း - 0.07% (2)workshop - 0.07% (2)velvet - 0.07% (2)super - 0.07% (2)သိရပါသည်။ - 0.07% (2)ငါ့ရုံးခန်းလို့ - 0.07% (2)xiumin - 0.07% (2)kyung - 0.07% (2)birth - 0.07% (2)january - 0.07% (2)blood - 0.07% (2)main - 0.07% (2)ဒါမှမဟုတ် - 0.07% (2)မကုန်ဘူး… - 0.07% (2)အခုဆို - 0.07% (2)mark - 0.07% (2)generation - 0.07% (2)acc - 0.07% (2)52nd - 0.07% (2)supporting - 0.07% (2)သြော်.. - 0.07% (2)လက်မှတ်နဲ့ - 0.07% (2)သွားလိုက် - 0.07% (2)အင်း.. - 0.07% (2)မေလေ.. - 0.07% (2)မေနဲ့ - 0.07% (2)ပြောလေ.. - 0.07% (2)တာတွေပါ။ - 0.07% (2)blind - 0.07% (2)ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် - 0.07% (2)သို့သော် - 0.07% (2)ပစ္စည်းတွေကို - 0.07% (2)ဆန်ကုန်သည်တွေက - 0.07% (2)ကြည်နူးစရာ - 0.07% (2)းကွက် - 0.07% (2)မိန်းကလေးကို - 0.07% (2)ဒီလိုနဲ့ - 0.07% (2)အရစ်ကျ - 0.07% (2)ပထမဆုံး - 0.07% (2)မျက်စိအထူးကု - 0.07% (2)ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့ - 0.07% (2)မျက်မမြင်မိန်းကလေးတစ်ယောက် - 0.07% (2)လက်မထပ်ဘူး - 0.07% (2)ရက်စက်လိုက်တာ - 0.07% (2)သူ့ဆန် - 0.07% (2)သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ - 0.07% (2)တတ်တဲ့ - 0.07% (2)တစ်ခုမှာ - 0.07% (2)-2016, - 0.07% (2)jin - 0.07% (2)ဆိုး - 0.07% (2)ဖြစ်သွားမယ် - 0.07% (2)ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ - 0.07% (2)win - 0.07% (2)လျာထားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ - 0.07% (2)door - 0.07% (2)28, - 0.07% (2)role - 0.07% (2)november - 0.07% (2)jung - 0.07% (2)ားလာ - 0.07% (2)လိုက်တာနဲ့ - 0.07% (2)ဟာဆိုရင် - 0.07% (2)ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ - 0.07% (2)ခေတ်ကျ - 0.07% (2)ဆုကိုရခဲ့ပါတယ်။ - 0.07% (2)most - 0.07% (2)don’t - 0.07% (2)လူမှုရေး - 0.07% (2)apan - 0.07% (2)ဆုရခဲ့ပါတယ်။ - 0.07% (2)ကောင်လေးအိမ်ကို - 0.07% (2)တယ် ။ - 0.67% (20)ပါတယ် ။ - 0.63% (19)running man - 0.47% (14)” ” - 0.37% (11)posted on - 0.33% (10)… ” - 0.3% (9)ပါ ဒါကတော့ - 0.27% (8)on june - 0.27% (8)d.o. က - 0.23% (7)d.o. ဟာ - 0.2% (6)ရှိပါပြီ ။ - 0.2% (6)resident evil - 0.2% (6)sm entertainment - 0.17% (5)– d.o. - 0.17% (5)။ running - 0.17% (5)post by - 0.17% (5)that’s love - 0.13% (4)poster လေးပါ - 0.13% (4)it’s ok - 0.13% (4)download ဆွဲ - 0.1% (3)awards ဆု​ပေးပွဲမှာ - 0.1% (3)it’s ok, - 0.1% (3)love ဇာတ်ကားနဲ့ - 0.1% (3)” ဆိုပြီး - 0.1% (3)ok, that’s - 0.1% (3)baeksang arts - 0.1% (3)tv series - 0.1% (3)my annoying - 0.1% (3)ဈေးချိ - 0.1% (3)june 23, - 0.1% (3)pure love - 0.1% (3)ဇာတ်ကားရဲ့ poster - 0.1% (3)းချို- 0.1% (3)တွေ နဲ့ - 0.1% (3)hello monster - 0.1% (3)movie review - 0.1% (3)ကျ န်းမာရေး - 0.1% (3)web drama - 0.1% (3)ဒါကတော့ သူ - 0.1% (3)arts award - 0.1% (3)june 21, - 0.1% (3)လေးပါ ဒါကတော့ - 0.1% (3)poster ပါ - 0.1% (3)ဒါကတော့ exo - 0.1% (3)girl and - 0.07% (2)က game - 0.07% (2)resident evil: - 0.07% (2)မှ တဆင့် - 0.07% (2)အန်ဒီ ၏ - 0.07% (2)တို့ အဖိုး - 0.07% (2)game ဆော့ရတာ - 0.07% (2)mobile game - 0.07% (2)game ကို - 0.07% (2)puzzle game - 0.07% (2)jelly pudding - 0.07% (2)အန်ဒီ တို့ - 0.07% (2)#thitsankhant posted - 0.07% (2)blind girl - 0.07% (2)” ဒေါက် - 0.07% (2)” သြော်.. - 0.07% (2)and her - 0.07% (2)နမ်မီဂျား မှ - 0.07% (2)ကနေ မြန်မာစာတန်းထိုး - 0.07% (2)channel myanmar - 0.07% (2)her love - 0.07% (2)မှာ it’s - 0.07% (2)go show - 0.07% (2)အခု online - 0.07% (2)အ ဖေ - 0.07% (2)by : - 0.07% (2)red velvet - 0.07% (2)ရှိ အနုပညာရှင်များ - 0.07% (2)vr myanmar - 0.07% (2)လို တော - 0.07% (2)န်းမာရေး လူမှုရေး - 0.07% (2)on july - 0.07% (2)to content - 0.07% (2)instagram email - 0.07% (2)couple အဖြစ် - 0.07% (2)ဆီ ဆား - 0.07% (2)ခေတ်ကျ မှ - 0.07% (2)ဈေးကွက် - 0.07% (2)exo က - 0.07% (2)xiumin နဲ့ - 0.07% (2)jung suk - 0.07% (2)exo next - 0.07% (2)exo အဖွဲ့က - 0.07% (2)facebook twitter - 0.07% (2)popular actor - 0.07% (2)next door - 0.07% (2)နဲ့အတူ lead - 0.07% (2)the beautiful - 0.07% (2)exo အဖွဲ့ရဲ့ - 0.07% (2)mark ပါ - 0.07% (2)nct က - 0.07% (2)name – - 0.07% (2)do kyung - 0.07% (2)d.o. ကို - 0.07% (2)s.m. entertainment - 0.07% (2)ဇာတ်လမ်းတွဲက poster - 0.07% (2)posted on june - 0.27% (8)။ running man - 0.17% (5)… ” ” - 0.13% (4)ok, that’s love - 0.1% (3)it’s ok, that’s - 0.1% (3)baeksang arts award - 0.1% (3)my annoying brother - 0.1% (3)ပြောလေ.. ” ” - 0.07% (2)blind girl and - 0.07% (2)လေးပါ ဒါကတော့ သူ - 0.07% (2)monday couple အဖြစ် - 0.07% (2)a blind girl - 0.07% (2)home facebook twitter - 0.07% (2)on june 21, - 0.07% (2)and her love - 0.07% (2)love ဇာတ်ကားရဲ့ poster - 0.07% (2)poster ပါ ဒါကတော့ - 0.07% (2)ကျ န်းမာရေး လူမှုရေး - 0.07% (2)exo က xiumin - 0.07% (2)နဲ့ nct က - 0.07% (2)popular actor ဆုကိုရခဲ့ပါတယ်။ - 0.07% (2)twitter instagram email - 0.07% (2)ပါ ဒါကတော့ exo - 0.07% (2)to the beautiful - 0.07% (2)most popular actor - 0.07% (2)mark ပါ ဒါကတော့ - 0.07% (2)Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.